wisdom – Dhammadīpa
Posted on 13 Jul 2019 by Ashin Sopāka
“Good, good, sisters! So it is withanoble disciple who sees this as it actually is with proper wisdom.” MN 146
“Seyyathāpi, bhaginiyo, mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato mūlampi aniccaṁ vipariṇāmadhammaṁ, khandhopi anicco vipariṇāmadhammo, sākhāpalāsampi aniccaṁ vipariṇāmadhammaṁ, chāyāpi aniccā vipariṇāmadhammā. Yo nu kho, bhaginiyo, evaṁ vadeyya: ‘amussa mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato mūlampi aniccaṁ vipariṇāmadhammaṁ, khandhopi anicco vipariṇāmadhammo, sākhāpalāsampi aniccaṁ vipariṇāmadhammaṁ, yā ca khvāssa chāyā sā niccā dhuvā sassatā avipariṇāmadhammā’ti; sammā nu kho so, bhaginiyo, vadamāno vadeyyā”ti?
“No hetaṁ, bhante”. “Taṁ kissa hetu”? “Amussa hi, bhante, mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato mūlampi aniccaṁ vipariṇāmadhammaṁ, khandhopi anicco vipariṇāmadhammo, sākhāpalāsampi aniccaṁ vipariṇāmadhammaṁ; pagevassa chāyā aniccā vipariṇāmadhammā”ti.
“Evameva kho, bhaginiyo, yo nu kho evaṁ vadeyya: ‘cha khome bāhirā āyatanā aniccā. Yañca kho cha bāhire āyatane paṭicca paṭisaṁvedeti sukhaṁ vā dukkhaṁ vā adukkhamasukhaṁ vā taṁ niccaṁ dhuvaṁ sassataṁ avipariṇāmadhamman’ti; sammā nu kho so, bhaginiyo, vadamāno vadeyyā”ti?
“No hetaṁ, bhante”. “Taṁ kissa hetu”? “Tajjaṁ tajjaṁ, bhante, paccayaṁ paṭicca tajjā tajjā vedanā uppajjanti. Tajjassa tajjassa paccayassa nirodhā tajjā tajjā vedanā nirujjhantī”ti.
“Sādhu sādhu, bhaginiyo. Evañhetaṁ, bhaginiyo, hoti ariyasāvakassa yathābhūtaṁ sammappaññāya passato.
နှမတို့ ဥပမာအားဖြင့် တည်နေဆဲဖြစ်သော အနှစ်ရှိသော သစ်ပင်ကြီး၏ အမြစ်သည်လည်း မမြဲ၊ ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိ၏၊ ပင်စည်သည်လည်း မမြဲ၊ ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိ၏၊ အခက်အရွက် သည်လည်း မမြဲ၊ ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိ၏၊ အရိပ်သည်လည်း မမြဲ၊ ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိ၏။
နှမတို့ အကြင်သူသည် “တည်နေဆဲဖြစ်သော အနှစ်ရှိသော ထိုသစ်ပင်ကြီး၏ အမြစ်သည်လည်း မမြဲ၊ ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိ၏၊ ပင်စည်သည်လည်း မမြဲ၊ ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိ၏၊ အခက်အရွက် သည်လည်း မမြဲ၊ ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိ၏။ ယင်းသစ်ပင်၏ အရိပ်သည်ကား မြဲ၏၊ ခိုင်ခံ့၏၊ အမြဲ့တည်၏၊ ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောမရှိ”ဟု ဆိုငြားအံ့၊ ထိုသူသည် အမှန်ပြောဆိုသည် မည်ရာအံ့လောဟု (မေး၏)။
အသျှင်ဘုရား အမှန်ပြောဆိုသည် မမည်ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်နည်းဟူမူ— အသျှင်ဘုရား တည်နေ ဆဲဖြစ်သော အနှစ်ရှိသော ထိုသစ်ပင်ကြီး၏ အမြစ်သည်လည်း မမြဲ၊ ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိ၏၊ ပင်စည် သည်လည်း မမြဲ၊ ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိ၏၊ အခက်အရွက်သည်လည်း မမြဲ၊ ဖောက်ပြန်ခြင်း သဘော ရှိ၏။ ယင်းသစ်ပင်ကြီး၏ အရိပ်သည်ကား အဘယ်ဆိုဖွယ်ရာရှိအံ့နည်း၊ မမြဲသည်သာတည်း၊ ဖောက်ပြန် ခြင်းသဘော ရှိသည်သာတည်းဟု (လျှောက်ကြကုန်၏)။
နှမတို့ ဤဥပမာအတူသာလျှင် အကြင်သူသည် “ဤခြောက်ပါးကုန်သော ဗာဟိရာယတနတို့သည် မမြဲကုန်၊ ယင်းခြောက်ပါးကုန်သော ဗာဟိရာယတနတို့ကို စွဲ၍ သုခဝေဒနာကိုလည်းကောင်း၊ ဒုက္ခဝေဒနာ ကိုလည်းကောင်း၊ ဥပေက္ခာဝေဒနာကိုလည်းကောင်း ခံစား၏၊ ထိုဝေဒနာသည် မြဲ၏၊ ခိုင်ခံ့၏၊ အမြဲ တည်၏၊ ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘော မရှိ”ဟု ဆိုငြားအံ့၊ ထိုသူသည် အမှန်ပြောဆိုသည် မည်ရာအံ့လောဟု (မေး၏)။
“Ví như, này các Hiền tỷ, có cây to lớn đứng thẳng, có lõi cây, với rễ vô thường, chịu sự biến hoại, với thân cây vô thường, chịu sự biến hoại, với cành lá vô thường, chịu sự biến hoại, với bóng cây vô thường, chịu sự biến hoại. Nếu có người nói như sau: “Có cây lớn đứng thẳng có lõi cây này, với rễ vô thường, chịu sự biến hoại, với thân cây vô thường, chịu sự biến hoại, với cành lá vô thường, chịu sự biến hoại, nhưng bóng mát của cây ấy là thường còn, thường trú, thường hằng, không chịu biến hoại”; này các Hiền tỷ, người ấy có nói một cách chân chánh không?
“Thưa không, thưa Tôn giả. Vì sao vậy? Thưa Tôn giả, cây to lớn đứng thẳng có lõi cây này, có rễ vô thường, chịu sự biến hoại, có thân cây vô thường; chịu sự biến hoại, có cành lá vô thường, chịu sự biến hoại. Còn nói gì đến bóng mát, cũng là vô thường, chịu sự biến hoại!
“Như vậy là phải, này chư Hiền tỷ! Nếu có ai nói như sau: “Sáu nội xứ này là vô thường, và do duyên sáu ngoại xứ này tôi cảm thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ; cảm thọ ấy là thường còn, thường trú, thường hằng, không chịu sự biến hoại”; này các Hiền tỷ, người ấy có nói chân chánh không?
“Thưa không, thưa Tôn giả. Vì sao vậy? Thưa Tôn giả, do duyên cái này, cái này, cảm thọ như thế này, như thế này khởi lên. Do diệt các duyên như thế này, như thế này, các cảm thọ như thế này, như thế này cũng biến diệt.
“Lành thay, lành thay, chư Hiền tỷ! Chính phải là như vậy, là cái nhìn như chơn với chánh trí tuệ của vị Thánh đệ tử.”
* “Muji Tree” is named in honour of Muji,avery special dog. This is actuallyaDogwood flower
Posted in Dhamma	| Tagged anicca, dhamma, impermanence, wisdom
Posted on 20 Apr 2019 by Ashin Sopāka
“The vigilant sage who practises alone,
who unshaken is by blame or praise,
is asalion that trembles not at sounds,
or as wind withinanet cannot be caught,
or likealotus flower by water not defiled,
leading other people but not by others led—
that one do the wise proclaim asasage.” Snp 1.12 (213, 7)
“Ekaṁ carantaṁ munimappamattaṁ,
Sīhaṁva saddesu asantasantaṁ,
Vātaṁva jālamhi asajjamānaṁ;
Padmaṁva toyena alippamānaṁ ,
Taṁ vāpi dhīrā muni vedayanti.”
တစ်ပါးတည်း လှည့်လည်သွားလာသော မောနေယျအကျင့်နှင့် ပြည့်စုံသော မမေ့မလျော့သော ကဲ့ရဲ့ခြင်း ချီးမွမ်းခြင်းတို့ကြောင့် တုန်လှုပ်မှုမရှိသော အသံတို့ကြောင့် မထိတ်လန့်သော ခြငေ်္သ့မင်းကဲ့သို့ အနိစ္စစသည်တို့ကြောင့် မထိတ် လန့်သော ပိုက်ကွန်၌ မကပ်ငြိသော လေကဲ့သို့ ခန္ဓာစသည်တို့၌ မကပ်ငြိသော ရေဖြင့် မလိမ်းကျံမကပ်ငြိသော ကြာကဲ့သို့လောကဖြင့် မလိမ်းကျံ မကပ်ငြိသောသူတစ်ပါးတို့ကို အရိယမဂ်ဖြင့် ဆောင်တတ်သော မိမိကို မူ သူတစ်ပါးက မဆောင်အပ်သော ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်း ပညာရှိတို့သည် မုနိဟူ၍ သိကုန်၏။
“Bộ hành, riêng một mình,
Vị ấy thật ẩn sĩ.”
Mushroom on Cow Patty
Posted in Dhamma	| Tagged bhikkhu, bhikkhuni, dhamma, monk, wisdom